လင်းငယ်၏ စာအုပ်လေး တစ်အုပ်: 2009
ခင်မင်ရင်းနှီး ငယ်ငယ်တည်းက တစ်လမ်းထဲမှာ တူတူနေ၊ တူတူကစား၊ တူတူ ပွားခဲ့ကြသော(ကောင်မလေးများ အကြောင်းဖြစ်၏) အစ်ကိုဘော်ဒါကြီး ဥက္ကဌခေါ် ကိုဘကြိုင်(ချဉ်ပေါင်ခြံ)က သူရေးထားတဲ့ အွန်လိုင်း စာပေလောကဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ တဂ်ကောဗျာ။ အဲ့ဒီမှာ စကွိုင်တာပဲ ကိုကလည်း တဂ်ဆိုရင် တတ်ချင်သလိုလိုရယ်။ အစ်မ လင်းကြယ်စင် တဂ်ထားတဲ့ အကြောင်းအရာတောင် မရေးတတ်လို ဟိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ မရေးဖြစ်ဘူး။ အခုများတော့လည်း ကိုဘကြိုင်ရဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးက ရေးချင်စရာကောင်းတာရယ်။ ကိုယ်ကလည်း ရေးစရာမရှိဖြစ်နေတာရယ်(နောက်တာနော်) နဲ့ပဲ ရေးပြီပေါ့။
အွန်လိုင်းပေါ်တွင် လူတွေ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မသိပဲလည်း စကားတွေပြော အသိမိတ်ဆွေတွေဖွဲ့ ဒါနဲ့ပဲ သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်သွားကြတာတွေ အများကြီးပေါ့လေ။ ထို့ပြင်တ၀ နောက်ပိုင်းကျတော့ အွန်လိုင်း ဘလော့ဂါများ ကိုကျွန်တော် တွေ့ရှိသွားသည်ပေါ့လေ။ အစကတော့ ဘာရယ်မဟုတ် စာအုပ်တွေ ဖတ်နေကျ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ စာတွေ မဖတ်ရတော့ ပြောရရင် စာလွမ်းဖျားလွမ်းနာကျလာတာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ အင်တာနက်ထဲဝင် ဟိုရှာ သည်ရှာနဲ့ မြန်မာဘလော့ တွေကစတွေ့တော့တာပဲ။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ရေကန်အသင့် ကြာအသင့်ပေါ့။ ပျင်းလာရင် စာလေးတွေ ဖတ်ပြီး အပျင်းဖြေလိုက်။ ဗဟုသုတရစရာတွေ၊ ဟာသတွေ ဇာတ်လမ်းလေးတွေ စသည့်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ စုံလို့ပါပဲ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အွန်လိုင်းကနေ ဘလော့ လည်ရခြင်းကို နှစ်သက်လာခဲ့ရော။ ဘာကြောင့်တုန်းဆိုရင်တော့ အကြောင်းပြချက်က ဗဟုသုတလည်းတိုး အပျင်းလည်းပြေတာကြောင့်လို့ပဲ ပြောရမှာပဲ။ ခေတ်ကြီးကတိုးတတ်လာတာနဲ့ အမျှ နည်းပညာတွေကလည်း မြင့်မားလာတော့ အရင်က ဆိုစာအုပ်ဖတ်မှ စာဆိုတာကို ဖတ်နိုင်ပေမယ့် အခုတော့ အင်တာနက်ထဲကနေပဲ ဖတ်လိုရနေပြီကော။ ဒါ့အပြင် အရင်က စာရေးတာ ၀ါသနာပါပေမဲ့ ချရေးဖို့ကို ၀န်လေး တချို့လည်း ကိုယ်ဖန်တီးထားတာလေးကို သူများတွေရဲ့ မနာလို လှောင်ပြောင်တာတွေကို ခံရမှာ ကြောက်တာနဲ့ပဲ မရေးဖြစ်ပဲ နေခဲ့ရာကနေ အခုများတော့ အင်တာနက်နဲ့ ဘလောဂါ ဒေါ့ကွန်းမှာ အကောင့်လေးဖွင့်လို့ အဆင့်သင့် ရေးသားရုံပေါ့။ တော်တော်များများကတော့ ပြောကြပါတယ်။ ဘလော့လေးရေးတော့ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး စိတ်ထွက်ပေါက်လေးရတာပေါ့တဲ့။ ဟုတ်ပါတယ် တစ်ခါတစ်လေမှာ ပါးစပ်ကနေ ထုတ်ပြောပြလို့ မရတဲ့ ခံစားချက်တချို့ကို စာသားတွေ အဖြစ်ပြောင်းလဲရေးပြခြင်းနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ခံစားချက် မွမ်းကျပ်မှုတွေကို ဖြေဖျောက်နိုင်တာကိုး။ ကျွန်တော်ဆိုလည်း သူများ ဘလော့တွေ လိုက်ဖတ်လိုက်လေ့လာ ဒီလိုမျိုးလုပ်ရင်းနဲ့ ကြာတော့ ကိုယ်လည်း သူတို့လို ရေးချင်းစိတ်လေးတွေ တဖွားဖွားပေါ့လေ ပေါ်လာပါလေရော။ ဒီလိုနဲ့ ဘလော့လေးတစ်ခုလုပ်(သူငယ်ချင်း ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ကျေးဇူးတင်ရမှာပါ သူသင်ပေးလို့ ဘလော့ဘယ်လို ပြုလုပ်တယ်ဆိုတာ သိခဲ့ရတာကိုး) ကိုယ့်ရဲ့ ခံစားချက်လေးတွေကို ရေး။ အစကတော့ တော်တော်လေးကို ၀မ်းနည်းရသေးတယ်။ ကိုယ်ကတော့ ရေးတင်လို့ ဒါပေမယ့် လာဖတ်သည့် သူက နတ္ထိ ကြာတော့ တွေးတောင်တွေးမိတယ် ငါရေးတင်နေတာ ဖတ်တဲ့ လူလည်း မရှိပဲနဲ့ ဘာလို့ ရေးနေမှန်းတောင် မသိတော့ဘူးလို့ရယ်လေ။ ဒါပေမဲ့ တဖြည်းဖြည်း ဘလော့တွေ လျှောက်လည် ကိုယ့်ရဲ့ ဘလော့လိပ်စာလေးကို ချန်ခဲ့ သူတို့က ပြန်လာလည် ပြီးတော့ မန့်ခဲ့တာလေးတွေ တွေ့ ပျော်ရတာပေါ့လေ။ တစ်နေ့တစ်နေ့ အားတိုင်း ဘလော့လေးကို ၀င်ကြည့်ပြီး ဘယ်သူများ လာပြီး လည်သွားခဲ့သလည်း ရယ်လို့ အခါခါကြည့်လို့ လာလည်သွားသူရှိလို့ကတော့ ပျော်လိုက်တာလေ။ တကယ်ပါ ပထမဆုံး မန့်ခဲ့တာကို တွေ့တုန်းကဆို ရင်ထဲမှာအတိုင်းအထက်အလွန်ပဲ ပျော်ပုံများပြောပါတယ်။ ငါ့ရေးတဲ့စာ ဖတ်တဲ့လူရှိပြီရယ်လို့။ ဒါနဲ့ပဲ တဖြည်းဖြည်း ရေးဖို့ကို အားတတ်လာတယ်။ တစ်ယောက် မန့်ရင် တစ်ခါအားတတ်နဲ့ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့် ဘလော့မှာတောင်ရေးထားသေး သင်၏ကွန်းမန့်တစ်ခုသည် ကျွန်တော့်အား စာများပိုမိုရေးဖြစ်ရန် အားဖြစ်စေပါသည်လို့။ ဘလော့တစ်ခုကိုရေးတာဆိုတာလည်း ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ညစ်စရာ ပျော်စရာ အသိပညာ စတာတွေကို လူအများနဲ့ မျှဝေခံစား နိုင်ဖို့ သူများရဲ့ စိတ်ညစ်စရာ ပျော်စရာ အသိပညာတွေကိုလည်း ကိုယ်က မျှဝေခံစားပေးဖို့ အတွက် အဓိကပါပဲ။ ကောင်းပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အွန်လိုင်းစာပေ လောကဟာ လူငယ်တွေ အတွက်ရော လူကြီးတွေ အတွက်ရော ရပ်ဝေးရောက်နေသူရော ရပ်နီးမှာ နေသူရော ကိုယ့်ရဲ့ အသိပညာ ပျော်စရာ ၀မ်းနည်းစရာ စတာတွေကို တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မျှဝေဖို့အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ စာပေလောကမှာ ထုတ်ဝေသူလိုအပ်သလို အွန်လိုင်းစာပေလောကမှာလည်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်အားပေးကူညီမှုက လိုအပ်နေဦးမှာပါ။ လူသစ်ကို ကြိုဆိုလို့ လူဟောင်းချင်းချင်း ခင်မင်ရင်းနှီးပြီး ပျော်ရွှင်စရာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အွန်လိုင်းစာပေလောကလေး ဖြစ်အောင် အားလုံးပဲ ၀ိုင်းဝန်းကြိုးစားလိုက်စို့ရဲ့...............
ဖော်ပြသူ လင်းငယ် တင်ပြတဲ့ အချိန်ကတော့ 6:27 PM9ယောက်ရဲ့ အားပေးသွားပုံက
လောကမှာ လူတွေဟာ အမှားများစွာပြုတတ်ပါတယ်။ တချို့လည်း အမှားမှန်း သိနေပါလျက်နဲ့ လုပ်နေကြသလို တချို့ကတော့ အမှားမှန်းမသိပဲ နဲ့ ပြုလုပ်မိသွားပါတယ်။ ဥပမာ အကုသိုလ်ပေါ့။ လူတိုင်းငယ်ငယ်က အကောင်ငယ်လေးတွေ သတ်တယ်။ လူကြီးတွေကတော့ ကလေးပဲ မသိလို့ သတ်တာ အပြစ်မရှိပါဘူး လို့အလွယ်တကူပြော တတ်တယ်။ ဒါက ကလေးတွေကို အဲ့ဒီလို အကောင်လေးတွေ သတ်ဖို့တွန်းအား ပေးနေသလိုဖြစ်နေတာ သတိမထားမိလို့ပါ။ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က သူငယ်ချင်းမလေး တစ်ယောက်ရှိတယ် သူကပြောတတ်တယ် ခြင်တွေကို သတ်တာ ငရဲမကြီးဘူးတဲ့ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ခြင်မှာ နားရွက်မပါလို့တဲ့။ နားရွက်မပါတဲ့ သတ္တ၀ါကို သတ်ရင် ငရဲမကြီးဘူးတဲ့။ ဘယ်ကနေသူသိလာတဲ့ အလွဲကြီးလဲတော့ မသိဘူးနော်။ လောကမှာ သူများ အသတ်သတ်ခြင်းက မသိလို့ သတ်တာဖြစ်ဖြစ် သိလို့ သတ်တာဖြစ်ဖြစ် အကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ အခြေအနေတစ်ခု အနေနဲ့ကတော့ မဖြစ်ပါဘူး။ အဲ့ဒါကဘာလည်း ဆိုတော့ သူတစ်ပါးကို သေစေလိုသည့် ဆန္ဒမပါရင် အကုသိုလ်မဖြစ်ပါဘူး။ ငရဲလည်း မကြီးဘူးပေါ့ဗျာ။ အခြားတစ်ဖက် အနေနဲ့ကတော့ သေစေလိုသည့် ဆန္ဒပါရင်တော့ အကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာပေါ့။ အသက်အရွယ်နဲ့ အကုသိုလ်ဖြစ်မှု မဖြစ်မှုက လုံးလုံး မသတ်ဆိုင်ပါ။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် သိတဲ့ အကြောင်းလေး နည်းနည်းပြောပြမယ်နော်။ ဘုရားလက်ထက်က မုဆိုးကြီး တစ်ယောက်ရှိသတဲ့။( ဘုရားလက်ထက်ကလို့ ထင်တာပဲ)။ အဲ့ဒီမုဆိုးကြီးဆီမှာ မိန်းမရှိတယ်တဲ့။ အဲ့ဒီမုဆိုးကြီးရဲ့ မိန်းမက မုဆိုးကြီး တောလိုက်ထွက်တော့မယ်ဆို ဇနီးမယားတို့ရဲ့ ၀တ္တရား အရ လက်နက်တွေ ယူပေးတာတွေ ဘာတွေလုပ်ပေးတာပေါ့လေ။ အဲ့ဒီ မုဆိုးကြီးဇနီးဟာ သောတာပန်ဖြစ်နေသူတဲ့။ တစ်နေ့တော့ ရဟန်းတွေကော လူတွေကကောပေါ့လေ မုဆိုးကြီးဇနီးဟာ သောတာပန် ဖြစ်ပါလျက်နဲ့ ဘာကြောင့် သူများအသတ်သတ်ဖို့ကို ပြင်ဆင်ပေးရတာလည်းပေါ့။ ဒီလိုမျိုးတွေ ပြောနေကြတယ်တဲ့။ ဒီအခါမှာ မုဆိုးရဲ့ ဇနီးက သူဟာ မုဆိုးကြီးကို ပစ္စည်းတွေပြင်ဆင်ပေးတာတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဟာတွေလုပ်ပေးတာဟာ ဇနီးမယားတစ်ယောက်ရဲ့ ကျင့်ဝတ်အရ ပြုလုပ်ပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဟာတွေ ကိုပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ အချိန်မှာလည်း သတ္တ၀ါတွေ သေပါစေဆိုတဲ့စိတ် မရှိပါဘူးတဲ့ အားလုံးကျန်းမာချမ်းသာ ပါစေလို့ စေတနာပွားနေခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ဒီကိစ္စမှာဆို လုပ်တော့ လုပ်ပေးတယ် စေတနာက သေစေချင်တဲ့ စေတနာမဟုတ်တဲ့ အတွက် အကုသိုလ်မဖြစ်ပါဘူး။ သောတာပန်ဆိုတဲ့ အတွက်လည်း ငါပါးသီလ ခါးဝတ်ပုဆိုးကဲ့သို့ မြဲနေပြီမဟုတ်လား။ ဒီတော့ သူအတွက် အပြစ်ပြုလုပ်ခြင်းဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ သောတာပန်ဟာ ဘုရားပေါ်မှာ အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ ငါးပါးသီလကို ခိုင်မြဲသွားပြီဖြစ်လို့ပါပဲ။ ဒါကျတော့ သိလျက်နဲ့ မမှားတော့တာပေါ့။ တချို့ကတော့ သိလျက်နဲ့ မှားနေတာတွေ ရှိရဲ့။ တချို့ဆို အကုသိုလ်အလုပ်မှန်းသိပါလျက်နဲ့ ဘုရားလှူတဲ့ ပစ္စည်းတွေခိုးလို့ တစ်မျိုး ဘုရားကပ်တဲ့ ပစ္စည်း ဘုရားမကပ်ပဲ သူတို့တွေ ယူစားတာမျိုးပေါ့လေ။ ဥပမာ ဂေါပက လူကြီးတွေပေါ့လေ။ သူတို့ဟာ သိပါလျက်နဲ့ မှားနေကြသူတွေပေါ့။
ကဲပါ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး။ စိတ်ထဲမှာ ရေးချင်တာလေးတွေ ချရေးပေးလိုက်တာနော်။ အားလုံးလည်း မသိမှားလည်း မဖြစ် သိမှားလည်း မဖြစ်ပဲ သိလျက်နဲ့ မမှားတဲ့ လူတွေဖြစ်အောင်ပေါ့။ နေ့တိုင်း ငါးပါးသီလလေး စောင့်တည်ပြီး နေကြည့်ကြပေါ့။ (ကျွန်တော်တော့ အခုထိ ငါးပါးသီလမှာ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုတော့ ချိုးဖျက်မိနေတုန်း။ ပုထုဇဉ်ဆိုတော့လည်း မလွယ်ဘူးပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ လုံအောင် စောင့်တည်ပါတယ်)။ အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
ဖော်ပြသူ လင်းငယ် တင်ပြတဲ့ အချိန်ကတော့ 9:01 PM3ယောက်ရဲ့ အားပေးသွားပုံက
ဆီပူအိုးကင်းပေါ်မှ ဂါထာတရာ ကလျာဏိယထေရ်
သီဟိုဠ်ကျွန်း အနောက်တောင်ပိုင်း ကလျာဏိမြစ်အနီး၌ ကလျာဏီတိဿမင်း(၃၀၆-၂၀၇ ဘီစီ) မင်းပြု၏။ ယဌာလတိဿဟုလည်း ခေါ်သည်။ ညီတော် အျာဥတ္တိယအား အိမ်ရှေ့ဥပရာဇာအရာနှင်းတော်မူ၏။ ညီတော် နောင်တော် နှစ်ဦးစလုံး ကလျဏိယ မထေရ်ကြီးထံ ပညာသင်ခဲ့ကြရသည်။ မင်းဖြစ်သော်အခါ မိမိတို့၏ ဆရာမထေရ်ကြီးအား နောက်ပါသံဃာများနှင့်အတူ နန်းတော်သို့ပင့်၍ နေ့စဉ်ဆွမ်းကပ်လှူလေ၏။
မကြာမီညီတော်အိမ်ရှေ့မင်းလည်း မရီးတော် မိဖုရားကြီးနှင့် အကျွမ်းတ၀င် ယဉ်ပါးဆက်ဆံ ဖောက်ပြန်လျက်ရှိရာ နောင်တော်ရိပ်မိသိရှိလေလျှင် ညီတော်မှာ ရွာသိမ်ရွာငယ်တခုသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင် နေရသည်။ ညီတော်ဥတ္ထိမင်းသားလည်း ကာလကြာသောအခါ မရီးတော်ကို သတိရလွမ်းဆွတ်သဖြင့် စာတစောင်ရေးကာ မိမိ၏ ကျွန်တော်ယုံတော်တဦးအား မိဖုရားကြီးထံ အပို့လွှတ်လေ၏။ ထိုကျွန်ယုံတော်သည် တခုသော နံနက်တွင် ရဟန်းယောင်ဆောင်၍ သင်္ကန်းဝတ်ကာ နန်းတော် တံခါးမုခ်က စောင့်နေကာ ကလျာဏိယ မထေရ်ကြီး နောက်ပါသံဃာများနှင့် အတူ နန်းတွင်းသို့ ဆွမ်းစားကြွအလာတွင် သံဃာများနှင့်အတူ ရောယောင် လိုက်ပါသွားလေသည်။
ကလျာဏိယမထေရ်ကြီး၏ စိတ်တွင် မင်းနှင့် အကျွမ်းဝင်သောရဟန်းတစ်ပါးဖြစ်မည် အထင်ဖြင့် တစုံတရာ မမေးမမြန်းပဲ အမှတ်တမဲ့ပင် ကြွတော်မူ၏။ မင်းကြီးလည်း မထေရ်ကြီး၏ တပည့်တပါးဖြစ်မည် ဟုပင်ယုံကြည်၍ တစုံတရာ ပြောဆိုစစ်ဆေး မေးမြန်းခြင်းမပြု။ ထုံးစံအတိုင်း မင်းနှင့်မိဖုရားတို့ ဆွမ်းဆက် ကပ်ကြ။၏။ ဆွမ်း အနုမောဒနာတရားပြီးလျှင် မင်းကြီးက ဦးစွာထ၍ နန်းတွင်းသို့ဝင်သွားခိုက် မိဖုရားကြီးမှာ သံဃာတော်အများအနီးသို့ တိုးသွားကာ ပန်းကန် ခွက်ယောက်များကို သိမ်းဆည်းစေရန် စီမံလေ၏။ သံဃာတော်များလည်း ပြန်ကြွရန် ဟန်ပြင်နေခိုက် သင်္ကန်းဝတ် တမန်လည်း မိဖုရားကြီးအနီး ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ ပေဖူးလွှာ စာတွေ တခု ပစ်ချလိုက်၏။ မင်းကြီးလည်း အတွင်းတော်သို့ မ၀င်ရောက်သေးမီ အသံကြား၍ နောက်သို့ လှည့်ကြည့်လိုက်သည်။ ပေဖူးလွှာ စာခွေကို မြင်ရသဖြင့် ချက်ချင်းပြန်လှည့်လာ၏။ စာကိုကောက်ယူ၍ ကြည့်လိုက်ရာ ဒေါသာအမျက်ခြောင်းခြောင်း ထွက်လေတော့သည်။
နန်းတော်မှ ထွက်ခွာကြွသွားသော သံဃာများထံ ချက်ချင်း နောက်က လိုက်စေ၍ ယနေ့မှ ဆွမ်းကျွေးရာသို့ လိုက်ပါလာသူ ရဟန်းယောင်အား မင်းချင်းများက ခေါ်ဆောင်လာကြရသည်။ ရဟန်းယောင်လည်း အမှန်အတိုင်းဝန်ခံလျှင် မိမိရော၊ မိမိဆရာ မင်းသားကိုပါ ကွပ်မျက်မည်ကို သိသဖြင့် ကလျာဏိယမထေရ်ကြီးအား အကာအကွယ်ယူရန် သတိရလေသည်။ မထေရ်ကြီးမှာ မင်းကြီး၏ ငယ်ဆရာလည်းဖြစ်၊ အလွန်လည်း အကြည်ညိုခံရသည်ကို သိထားသည်အတိုင်း မင်းကြီးစစ်ဆေးလျှင်-
`ဒကာတော်မင်းကြီး..၊ ဒီစာခွေကို ဦးပဉ္စင်းအား ဆရာတော်ကြီးက မိဖုရားကြီးရှေ့မှာ ချခဲ့ရမယ်ဆိုလို့ ချခဲ့ရပါတယ်´ ဟုပြောလေ၏။ မင်းကြီးလည်း ပို၍ပင် ဒေါသထွက်ကာ- `ငါကတော့ ရဟန္တအမှတ်နဲ့ ကိုးကွယ်ခဲ့တယ်။ ယခုတော့ ညီတော်ရဲ့ တမန်အလုပ်ကို လုပ်ရက်ပါပေတယ်။ ငါ့ဆရာဟာ ငါ့မိဖုရားကိုပဲ ယူပြီး ဘုရင်များ လုပ်ချင်သေးလို့လား´ ဟုရေရွတ်ပြောဆိုလေ၏။
ကလျာဏိယ မထေရ်နှင့် ဆီပူအိုးကင်း
အာဏာပါးကွက်သား သူသတ်သမားများကိုလည်း ချက်ချင်းဆင့်ခေါ်ကာ ကလျာဏိယမထေရ်ကြီးအား ကျောင်းသိုပ သွားရောက် ဆွဲခေါ်စေ၏။ နန်းတွင်း၌ပင် ဆီအိုးကင်း ကြီးတခု၌ ဆီများအပြည့်ထည့်ကာ ကျိုက်ကျိုက်ဆူအောင် မီးထည့်ခိုင်းလေ၏။ မထေရ်ကြီး ရောက်လာလျှင် ဒေါသတကြီး ရေရွတ်ကြိမ်းမောင်းကာ တစုံတရာ မေးမြန်းစိစစ်ခြင်းမရှိ၊ ဆီအိုးကင်း၌ထည့်၍ ကြော်ပြီးသတ်ရန် တချက်လွှတ်အမိန့်ချလိုက်လေသည်။ မင်းကြီးသည် မစူးမစမ်း မဆင်မခြင်ပဲ ဒေါသတကြီါ် သူသတ်သမား မင်းခယောက်ျားများအား အမိန့်ချနေသည် အချိန်မှစ၍ ပညာရှိမှုးကြီး မတ်ကြီါ်များလည်း တဦးပြီးတဦး သတိပေးစကားများ လျှောက်ထား သံတော်ဦးတင် ကြ၏။ အသက်ကိုပင်စွန့်၍ ၀ံ့ဝံ့စားစား အကြောင်းအကျိုးပြ တားမြစ်ကြသော်လည်း မင်းကြီးမှာ မည်သူ့စကားကိုမျှ အလေးမမူ လျစ်လျူရှု၍သာနေလိုက်၏။ သတ်ရန်အမိန့်ကိုလည်း တွင်တွင် ချမှတ်နေသည်။ မထေရ်ကြီါ်မှာ အမှန်အတိုင်းဖွင့်၍ ပြောသော်လည်း အခြားတစုံတဦး အားအသက်ဘေးမှ ချမ်းသာခွင့်ပေးမည်မဟုတ်သည်ကို သိတော်မူသဖြင့် မည်သို့မျှ အမိန့်ရှိတော်မမူတော့ချေ။ သူသတ်သမားများ ဆွဲခေါ်ရာသို့သာ လိုက်ပါ၍ များစွာသံဝေဂ ဖြစ်တော်မူရလေ၏။ မေတ္တာနှင့် ၀ိပဿနာ တရားကိုသာ ပွားများလိုက်ပါယင်း နန်းတွင်းသို့ရောက်လျှင်လည်း သူသတ်သမားများ စီမံဆွဲတင်သည့် အတိုင်း ဆီပူအိုးကင်းကြီးထဲသို့ ဆင်းသက်တော်မူရလေ၏။ မတုန်မလှုပ်ပင် ရုပ်နာမ်သဘောများကို ဆင်ခြင်သုံးသပ်ယင်းဆီပူအိုး ကင်းကြီးထဲသို့ ဆင်းတော်မူရာ ဆီပူထဲသို့ မရောက်မီမှာပင် မဂ်ဖိုလ်လေးဆင့် ဉာဏ်မြတ်ရင့်၍ အမြင့်မြတ်ဆုံးသော အရဟတ္တဖိုလ်သို့ ရောက်တော် မူလေ၏။ အရဟတ္တဖိုလ် ဂုဏ်သတ္တိကြောင့် မထေရ်ကြီး၏ မွေးညင်းတော်မျှကိုပင် ပူလောင်ခြင်းမရှိချေ။
လင်းငယ်- သူတော်ကောင်းများရဲ့ သည်းခံနိုင်မှုစွမ်းအားကြီးမားပုံကို ကြည်ညိုဖို့ကောင်းလိုက်ရဲ့ နောက်ပြီး အရဟတ္တဖိုလ်ရဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ ဂုဏ်သတ္တိကို သိသာနိုင်ပါတယ်။ မထေရ်ကြီး၏ အတိတ်ကံ နှင့် မထေရ်ကြီးအား မဆင်မခြင် သတ်မိ၍ အပြစ်သင့်သွားတဲ့ မင်းကြီး၏ ကံတရားကို ဆက်ရေးပါမယ်။
မူရင်းစာအုပ်- ဓမ္မာစရိယ ဦးဌေးလှိုင်ရေး သီဟိုဠ်ခေတ်စံတော်ဝင် အရိယာများ
ဖော်ပြသူ လင်းငယ် တင်ပြတဲ့ အချိန်ကတော့ 9:00 PM 1 ယောက်ရဲ့ အားပေးသွားပုံက
အသက်ကလေးရယ် ရှည်စေလို မန်းတောင်ရိပ်ခို ဆိုတာ ဟိုးငယ်ငယ်လေးထဲက ကြားဖူးနေကြစကားပါ။ လူတိုင်း လူတိုင်းလည်း ကြားဖူးနေပါလိမ့်မယ်။ တကယ်ပဲ မန်းတောင်ရိပ်ကိုခိုရင် အသက်ရှည်မရှည်တော့ မသိပါဘူး။ အသက်ရှည်အနာမဲ့ရခြင်းရဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ မြတ်စွာဘုရားက သိကြားမင်း မေးလို့ ဖြေထားတဲ့ တရားတော့ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ မိုးကုတ်ဆရာတော် ဘုရားကြီး ဟောထားလို့ အဲ့ဒီတရားကို နာဖူးပါတယ်။ အခုပြောပြမယ်နော်။ သိတဲ့လူလည်း ပြန်သတိရ မသိသေးတဲ့ လူလည်းသိသွားတာပေါ့နော်။
မြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူတဲ့ အခါ သိကြားမင်းဟာ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကို မသိတာတွေ မေးမြန်းဖို့ အတွက် ဘုရားရှင်ထံသို့ ရောက်လာတယ်တဲ့။ အဲ့ဒီသိကြားမင်းဟာ ဘုရားရှင်ပွင့်တော်မမူခင် တုန်းကတည်းက ဖြစ်နေတဲ့ သိကြားမင်းတဲ့ဗျာ။ သိကြားမင်းဆိုတဲ့ အတိုင်း နတ်တို့၏ ထက်မြတ်ပြီး ကြံလုံးစီလုံး များတဲ့ ဥာဏ်နဲ့ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကို သူမသိတာတွေ နားမလည်တာတွေ မေးမြန်းဖို့ လာခဲ့တယ်တဲ့။ အဲ့ဒီ သိကြားမင်းမေးတဲ့ မေးခွန်းတွေဟာလည်း ခန္ဓာဥာဏ်ရောက် သစ္စာတရားတွေကို အားထုတ်ထားတဲ့ လူမဟုတ်ရင် မဖြေနိုင်ဘူးတဲ့ ဗျာ။ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ သိကြားမင်းဟာ မြတ်စွာဘုရားထံပါးကို ရောက်သွားတော့ အရှင်ဘုရား လူတွေဟာ မိမိကိုယ်ကိုယ် ကျန်းမာခြင်းအကြောင်း ဘေးအန္တာရယ်ကင်းခြင်း အကျိုးအတွက် မိမိကိုယ်ကို မေတ္တာပို့ ဆုတောင်း စသည်ဖြင့် အသက်ရှည် အနာမဲ့ခြင်း အကျိုးငှာ ပြုလုပ်ကြပါတယ်တဲ့။ သို့သော်လည်း ထိုသူတို့သည်ပဲ အသက်ရှည်ခြင်းကင်းမဲ့၍ အနာများကြရသည်မှာ မည်သည့်ကြောင့်ပါလည်းလို့ မေးတာပေါ့ဗျာ။ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလည်း ဒကာတော် သိကြားမင်း တကယ်တော့ အသက်ရှည်ခြင်းအကျိုးသည်က က္ကဿာ(ကိတ်သာဟုအသံထွက်ပါသည်..သေချာမပေါင်းတတ်လို့ပါခင်ဗျာ) မစ္ဆေရကြောင့် ဖြစ်သည်တဲ့။ က္ကိဿာဆိုသည်မှာ သူများကြီးပွားခြင်းကို မနာလိုခြင်း စသည်ကို ခေါ်ပါသည်။ မစ္ဆေရ ဆိုသည်မှာ မိမိတွင်ရှိသည့် ပစ္စည်များကို သူတစ်ပါးအား ပေးရမည်ကို နှမျောတွန့်တိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကို သိကြားမင်းက အဲ့ဒီ က္ကိဿာမစ္ဆေရဆိုတာ ကောဘယ်ကနေလာပါသလည်း ဘုရားတဲ့ ဒီတော့ဘုရားရှင်ကလည်း ချစ်ခြင်းမုန်းခြင်းကနေလာသကွာတဲ့။ ချစ်ခြင်းမုန်းခြင်းကကောဘယ်က လာသလည်းဘုရားတဲ့ ဘုရားကလည်း ဆန္ဒကနေလာတယ်လို့ ဖြေလိုက်တယ်တဲ့။ ဖြေလိုက်တဲ့နောက်မှာပဲ သိကြားမင်းလည်း သောတာပန်တည်လို့ သိကြားဘ၀ကနေ စုတေစိတ်ကျလို့ စုတေပြီး တရားပွဲထဲမှာတင် သိကြားမင်းပြန်လာဖြစ်တယ်တဲ့ဗျာ။ သိကြားမင်းယခုလို စုတိစိတ်ကျပြီး သိကြားပြန်ဖြစ်တာကို သိကြားနဲ့ ဘုရားကလွဲရင် ဘယ်သူမှမသိလိုက်ဘူးတဲ့။ အဓိကကတော့ အသက်ကလေးရယ်ရှည်ချင်ရင်တော့ သူတစ်ပါးကို မနာလို ဖြစ်တဲ့စိတ်ကို မဖြစ်နိုင်အောင်လုပ် နောက်ပြီး ကိုယ့်ပစ္စည်းကို နှမျောတွန့်တိုတဲ့စိတ်ကို ဖျောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပေါ့နော်။ ဖြစ်ပေါ်လာခါနီးတဲ့ မနာလိုစိတ်ကိုလည်း ၀ိပဿနာအနေနဲ့ ဖြစ်ပျက်သာရှု နှမျောတွန့်တိုစိတ်ကိုလည်း ဖြစ်ပျက်သာရှု ဒါဆို အကုသိုလ်စိတ်တွေ မဖြစ်ပေါ်တော့ပဲနဲ့ အကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့ စိတ်ကနေ ကုသိုလ်စိတ်အဖြစ်ပြောင်းလို့ အသက်ရှည်အနာမဲ့ တဲ့ လူ့ဘ၀လေးကို နေနိုင်မှာပေါ့ဗျာ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ တရားအားထုတ်ရင်းနဲ့ပဲ တစ်မဂ်တစ်ဖိုလ်ရ ဒါမှမဟုတ် ကိစ္စပြီးလို့ သံသရာကို ဖြတ်နိုင်ကြတာပေါ့ဗျာ။ ခဏရတဲ့ လူ့ဘ၀ကို တန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချလို့ အသုံးဝင်တဲ့ လူ၊ တန်ဖိုးရှိတဲ့ လူတစ်ယောက် အနေနဲ့ သေဆုံးခြင်းကို ရဲဝံ့စွာ ရင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ.....
ဖော်ပြသူ လင်းငယ် တင်ပြတဲ့ အချိန်ကတော့ 5:22 PM4ယောက်ရဲ့ အားပေးသွားပုံက
အခုတလော ကျွန်တော့်ကို တော်တော်များများက မေးကြတယ် ပျောက်လှချေလားတဲ့။ ဘာတွေလုပ်လို့ ဘယ်တွေသွားနေလည်းပေါ့လေ။ (ဘယ်ဆီကိုမင်းရောက်နေလည်း ဘာတွေကို မင်းလုပ်နေလည်း လို့တောင် သီချင်းလေးတွေ ဟစ်နေမလားပဲ.. ဟီးဟီး နောက်တာ)။ အဓိကကတော့ မမလင်းပေါ့နော်။(သူ့ကို အစ်မလို့ ခေါ်တာမကြိုက်ဘူးတဲ့ ဒါပေမယ့် ခေါ်လိုက်ပြီ)။ အွန်လိုင်းမှာတွေ့တော့ ဘယ်တွေပျောက်တဲ့။ ဟုတ်ကဲ့ ပျောက်နေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ကျွန်တော် သီဟိုဠ်ခေတ်စံတော်ဝင် အရိယာများ ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ဖတ်နေလို့ပါ။ ဒီစာအုပ်ကို ဖတ်တာလည်း ဟိုတစ်ပျက် ဒီတစ်ပျက်နဲ့ မပြီးနိုင်ဖြစ်နေရော။ ဒါနဲ့ သေချာလေး အချိန်ယူပြီး ဖတ်ရင်းနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ထူးခြားအံ့သြဖွယ် ကောင်းမှု၊ နောက်ပြီး ကြည်ညိုလေးစားဖို့ကောင်းတဲ့ အရိယာသူတောင်ကောင်းကြီးတွေ အကြောင်း၊ သာသနာကို အထောက်အပံ့တွေပေးသွားခဲ့တဲ့ မင်းကောင်းမင်းမြတ်တွေ အကြောင်း စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ ဒါတွေကို ဖတ်မိပြီး အရမ်းကို ပီတိဖြစ်နေတယ်။ ဒါနဲ့ ဆက်ဖတ်နေတုန်းပါပဲ။ ဒီလို ဆက်ပြီး ဖတ်နေတုန်း စိတ်ထဲမှာ သြော် လူတော်တော်များများ လည်းဖတ်ဖူးချင်မှာဖတ်ဖူးမယ်။(ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ စာအုပ်ကတော်တော်လေး ထူပါတယ်။ စာဖတ်ပျင်းတဲ့လူဆို ဖတ်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။)။ နောက်ပြီး တစ်ချို့လည်း ဖတ်ချင်နေတဲ့လူတွေရှိမယ်။ ဒါတွေကို တွေးမိလို့ အရင်ဆုံး ကြော်ငြာလေးတော့ ငါ့ဘလော့မှာ ၀င်ထိုးလိုက်ဦးမှဆိုပြီး တွေးမိတာနဲ့ ကွန်ပြူတာလေးကို ဖွင့်ပြီး အခုဒီစာလေးကိုရေးဖြစ်သွားရော။ ကျွန်တော် အခုဖတ်နေတဲ့ သီဟိုဠ်ခေတ်စံတော်ဝင် အရိယာများဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ဖတ်ပြီး ရင်အဲ့ဒီထဲက ကြည်ညိုဖွယ်ကောင်းတဲ့ အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့ အကြောင်း။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရဲ့ အံ့သြဖွယ်ကောင်းမှု စတာတွေကို ပို့စ် အနေနဲ့ ရေးပြီးတင်ပါမယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘော်ဘော်များ အားလုံး စောင့်ပြီး ဖတ်ပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံရင်းနဲ့ပဲ.....
ဖော်ပြသူ လင်းငယ် တင်ပြတဲ့ အချိန်ကတော့ 10:37 AM5ယောက်ရဲ့ အားပေးသွားပုံက
ငါ့ကိုနားလည်ပေးပါ နှင့် ငါနားလည်ပါတယ်...
ကျွန်တော့်မှာသူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ မိဘချင်းလည်း ခင်မင်တဲ့သူငယ်ချင်းပါ။ သူက သဘောလည်း ကောင်းတယ်။ လူတစ်ကာကိုလည်း အားနာတတ်တယ်။ သူနဲ့ကျွန်တော်က စင်ကာပူ စရောက်မှခင်ကြပေမဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေလိုပဲ အရမ်းရင်းနှီးပါတယ်။ သူရဲ့ လူတကာကို အရမ်းအားနာ တတ်တဲ့ စိတ်က တစ်ခါတစ်လေကျရင် မကောင်းပါဘူး။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ သူပဲနစ်နာရလို့ပါ။ တစ်ခါတစ်လေကျရင် သူရဲ့ အားနားမှုကြောင့် ကျွန်တော်နဲ့ ကိုသီဟဆိုတဲ့ အစ်ကိုကြီးမှာ သူဘက်ကနေ ဒေါသထွက်ရတာတွေရှိပါတယ်။ သူရဲ့ အားနာတတ်မှုကတော့ စံနမူနာ တင်လောက်ပါတယ်။ နောက်ပြီး သူအမြဲပြောနေကြစကား ရှိပါတယ်။ သူကို ကျွန်တော်တို့က တစ်ခုခုကြောင့် ပြောပြီးဆိုရင် သူက ပြောတတ်တယ်။ ငါ့ကို နားလည်ပေးကျပါကွာတဲ့။ တစ်ခါလည်း ကျောင်းကနေပြန်တော့ သူ့ကို ကျွန်တော်ရယ် ကိုသီဟရယ်က သူ့ကို အပြင်သွားဖို့ခေါ်ပါတယ်။ သူက ဒီပြင်လူတစ်ယောက်နဲ့ ချိန်းထားလို့ မလိုက်တော့ဘူးတဲ့။ ချိန်းထားတဲ့ အချိန်ကလည်း ညကျမှဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ သူ့ကို ပြောတော့ သူက ကျွန်တော်တို့ကို သူဖုန်းပြောနေရင်းတန်းလန်းနဲ့ အဝေးကြီးကနေ ငါ့ကိုနားလည် ပေးကြပါကွာ ဆိုပြီးပြောတော့။ ကျွန်တော်တို့မှာ ရယ်လိုက်ရတာ။ နောက်ပြီး သူဖုန်းပြောနေတဲ့ စိုင်းဆိုတဲ့ လူကလည်း နောက်နေ့ကြတော့ ပြောပါလေရော မြန်မာရုပ်ရှင်ကား ထဲက အထာတွေဆိုပြီး။ သူကျွန်တော့်ကို အဲ့ဒီလို နားလည်ပေးဖို့ အမြဲပြောတော့ ကျွန်တော်လည်း ပြီးပြီးရောဆိုပြီး ငါမင်းကို နားလည်ပါတယ်ကွာ ဆိုပြီး ပြန်ပြောတတ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ကျွန်တော် စဉ်းစားမိတာက တစ်မျိုးဖြစ်လာတယ်။
လူဆိုတာ တကယ်တော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် နားလည် ဖို့မလွယ်ပါဘူး။ စဉ်းစားကြည့်လေ တစ်ခါတစ်လေ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်းနဲ့ အအေးသောက်ချင်လာလိုက်။ ကောင်းတဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်မယ် စဉ်းစားရင်းနဲ့ပဲ မကောင်း တဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်မိပြန်ရော။ ဒီလောက်ကိုကြည့်ရုံနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် နားလည်ဖို့ ခက်တယ်ဆိုတာ သိသာပါတယ်။ ဒါကို သူများကို နားလည်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်လောက်ခက်မလည်းနော်။ မြတ်စွာဘုရားနဲ့ ရှင်သာရိပုတ္တရာ ကတောင် ပြောခဲ့သေးတာပဲ သူတစ်ပါးရဲ့ စိတ်အကြံကို သိဖို့က ခဲယဉ်းပါတယ်တဲ့။ ဒီတော့ လူတစ်ယောက်ကို အခြားတစ်ယောက် ကနားလည်ပါတယ်ဆိုတာ အပေါ်ယံ နားလည်တာပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ တကယ့် အတွင်းကျကျနားလည်တာ စိတ်ကိုနားလည်တာ ဖြစ်ဖို့တော့ မဟုတ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် စဉ်းစားမိတယ် ငါကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် သေချာနားမလည်သေးပဲ သူများကို မင်းကိုငါနားလည်ပါတယ်ဆိုတာ နောက်ဆို မပြောသင့်ဘူးလို့။ ဒါကြောင့် သူများကို နားလည်ဖို့ထက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် နားလည်ဖို့ အရင်ကြိုးစားပါဦးမယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်နားလည်ရင် သူများကို နားလည်ဖို့ဆိုတာ လွယ်ကူသွားပါပြီ။ တရားသဘောအရဆိုရင်တော့ ခန္ဓာရဲ့ သဘောကို နားလည်ရင် အရာအားလုံးကို နားလည်လာလိမ့်မယ်။ နောက်ကျွန်တော် ပြောနေကျစကားလိုပဲ လောကဓမ္မရဲ့ အရှိသဘောကို သိလာရင် အသိသဘောနဲ့ အားလုံးရှိလာပါလိမ့်မယ်ပေါ့။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ လောကရဲ့ သဘောကိုက တည်မြဲခြင်းမှ မရှိပဲ ဖြစ်ပျက် ဆိုတာပဲ ရှိတော့ကာ အဲ့ဒီ အသိသဘောရှိရင် ချမ်းသာလို့လည်း မသာယာသလို ဆင်းရဲလို့လည်း ထူးပြီး စိတ်ညစ်မနေတော့ပါဘူး။ အသိသဘောနဲ့ အားလုံးရှိလာမှာမို့ပေါ့နော်.....
ဖော်ပြသူ လင်းငယ် တင်ပြတဲ့ အချိန်ကတော့ 11:39 AM3ယောက်ရဲ့ အားပေးသွားပုံက
လမ်းဆုံမှာ ကမ်းကုန်အောင် မိုက်နေတဲ့ အိုလူမိုက်
ချမ်းသာရုံအတွက် မင်းရဲ့လက်ရှိဘ၀ကို မိုက်မဲမလို့လား?
ငွေဆိုတာ သုံးတတ်ရင်ဆေး မသုံးတတ်ရင်ဘေးတဲ့
မင်းရဲ့လက်ရှိဘ၀ အခုတော့ မတရားမှုကြောင့်
ဒါပေမယ့် တွေးကြည့် တစ်ရက်လောက်များ တောင်
ဘ၀ကို ရောင့်ရဲနိုင်တာ အကောင်းဆုံးပေါ့…
မင်းရဲ့ အရင်တုန်းက ထမင်းနပ်မှန်တဲ့ဘ၀က
စာရိတ္တနဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှုတွေ မင်းကြွယ်ဝခဲ့တယ်….
ပျော်ရွှင်ခြင်းကို ရှာမတွေ့တော့ လို့ ငြီးတွားမနေနဲ့တော့…
မင်းမသိလို့ပါ… မင်းရဲ့ စည်းစိမ်တွေက မင်းကိုလှောင်နေလေရဲ့
မင်းက မင်းပိုင်တယ်ထင်ပေမယ့် မင်းသေရင် သူတို့ဟာ
မသိတတ်တဲ့ ငမိုက်သားတော့ မတရားမှုနဲ့ ပျော်နေလေရဲ့တဲ့…
မဟုတ်ရင်တော့ လမ်းဆုံးမှာ ငရဲက တဟဲဟဲနဲ့
ပါးစပ်ဖြဲလို့ မင်းအတွက်စောင့်နေမှာ ……(အိုလူမိုက်)
ဖော်ပြသူ လင်းငယ် တင်ပြတဲ့ အချိန်ကတော့ 4:43 PM4ယောက်ရဲ့ အားပေးသွားပုံက
Cupid ၏ အချစ်ဇာတ်လမ်းအဆုံး
`သားရေ.. ဒီနေ့ အမေတို့ ငယ်ငယ်က မင်းအဖေ တာဝန်ကျတဲ့ မော်လမြိုင်မြို့က အိမ်နီးနားချင်း ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဦးမင်းခေါင်တို့ မိသားစု အိမ်ကိုလာလည်လိမ့်မယ်သားရေ။ သူတို့ကို ဒီနေ့ ထမင်းဖိတ်ကျွေးမလို့ သားအပြင်သွားရင်လည်း ထမင်းစားချိန်အမှီပြန်လာနော်။´
ဒါကကျွန်တော့်အမေ ကျွန်တော့်ကို သတိပေးတဲ့ စကားပေါ့။
`သူတို့က ဘာလို့ အိမ်လာလည်မှာလည်း မေ။ သူတို့က အခုရန်ကုန်ကို ပြောင်းလာပြီလေ သားရဲ့။
ဒီတော့ မေတို့က သူတို့ကို ထမင်းဖိတ်ကျွေးပြီး ပြန်ဆုံကျတာပေါ့။ နောက်သူတို့မှာလည်း သမီးလေး တစ်ယောက်ရှိတယ်လေ။ သားနဲ့လည်း မိတ်ဆက်ပေးရင်းပေါ့။´
မေ ဒီလိုပြောနေတဲ့ အချိန်မှာ မေ့မျက်လုံးတွေထဲမှာ အဓိပ္ပါယ် ဖော်လို့ မရတဲ့ အရာတွေကို ကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်။ ဒါနဲ့ပဲ မေ့ကို
`မေတို့ဘာအကြံတွေရှိလည်း သားသိနေသလိုပဲနော် မေ။´
`ကဲ သားရယ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ပြောထားလိုက်မယ်။ မေတို့ လူကြီးချင်းက သားတို့ငယ်ငယ်တုန်းက စကားကမ်းလှမ်းထားတာရှိတယ် သူတို့ကလည်း သူတို့ သမီးလေးကို လူဆိုး ဂျပိုး တွေ နဲ့ဆုံ မှာစိုးလို့ အကြောင်းသိချင်း ဖြစ်တဲ့ သားနဲ့ တော့ စိတ်အေးမယ့် ပုံရတယ်။ မေတို့ အနေနဲ့ကလည်း သားလေး ကို မိန်းမလည် မိန်းမရှုပ်တွေနဲ့ တွေ့မှာစိုးတာလည်းပါတာပေါ့။ ဒါကြောင့် သားတို့ ချင်းတွေ့ပေးဖို့ကို တမင်စီစဉ်ပြီါ် ဒီ ထမင်းစားပွဲကို လုပ်တာပဲ သား။´
`မေတို့ကလည်း.. သားက မေတို့ သဘောအတိုင်းပဲ လုပ်ရမှာလား။ သားချစ်တဲ့သူနဲ့ သားစိတ်တိုင်းကျနေခွင့်မရှိဘူးလား´
`သားက ချစ်သူရည်းစားတွေများ ရှိနေလို့လား။ ရှိနေရင်တော့လည်း တစ်မျိုးစဉ်းစားရမှာပေါ့´
`ရှိတော့ မရှိသေးဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် ရှိလာမှာမို့ပြောနေတာပေါ့ မေရာ´
မေနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့က ဒီလိုပါပဲ သားအမိဆိုပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေလိုပဲ စကားကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောတတ်အောင် မေက ငယ်ငယ်ထဲက သင်ထားခဲ့တာလေ။ ဒီတော့ အရာရာမှာ ကျွန်တော်က မေ့ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးတတ်ခဲ့တယ်။ မေနဲ့စကားပြောနေရင်းနဲ့ပဲ အိမ်ရှေ့ကနေ ထော်ကြီးရဲ့ ရှေ့ပြေးအနေနဲ့ အော်ကျယ်အော်ကျယ်နဲ့ ၀င်လာတဲ့ အသံတွေကို ကြားရတော့တာပဲ။
`ဟေ့ကောင်... ဥက္ကာ ဘာလုပ်နေလည်းဟ မြန်မြန်လုပ် လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ထိုင်ရအောင်။ ´
`လာပြီဟေ့ အဆင်သင့်ပဲ။ မင်းတို့ လာခေါ်ကို စောင့်နေတာဟ´
ကျွန်တော် မေ့ရှေ့ကနေ ထွက်လာတော့ မေက လှမ်းပြီးပြောသေးရဲ့
`သားရေ.. သမီးလေရဲ့ နာမည်မှတ်ထားဦး မယ်မဒီတဲ့။ အခုတလောကမှ ခြံအမှတ် ၃၀၁ ကို ပြောင်းလာတာနော်´
ဒီစကားက ကျွန်တော့်ရဲ့ ရင်ကို ခုန်သွားစေတယ်။ မြန်မာဆန်သူလေးများ ဖြစ်နေမလား ဆိုတဲ့ အတွေးတွေ ၀င်လာတာကိုး။ ဒီလိုနဲ့ ဟိုကောင်တွေနဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို ထွက်လာခဲ့တယ်။
`ဟေ့ကောင် ဥက္ကာ.. မင်းကို မေးစရာရှိတယ်။ မနေ့က ဟို တစ်ယောက် မဟာဆန်သူဆိုတဲ့ သူကိုမင်းဘယ်လို သဘောရလည်း။ စိတ်ဝင်စားလား။´
`အမှန်အတိုင်းပြောရရင်တော့... Y.E.S... yes ပေါ့ကွာ´
`အေးဒါဆိုရင် မင်း သူရဲ့ နာမည်ကို သိချင်လား... ဟဲဟဲ သိချင်ရင်တော့ ဒီတစ်ဝိုင်းပေါ့ကွာ´
`သားကြီး... ငါက Cupid ပါကွာ။ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ နာမည်ကို သိဖို့ဆိုတာ ငါ့အတွက်မခဲယဉ်းပါဘူး´
ထော်ကြီးနဲ့ ကျန်တဲ့ နှစ်ကောင်ပါ ပါးစပ်လေးတွေဟလို့ ကျွန်တော့်ကို ကြောင်ကြည့်နေတယ်။ တကယ်ကတော့ ကျွန်တော် က ဟုတ်လေမလားလို့ အကြောင်နဲ့ ဖောလိုက်တာ။ ဒါပေမယ့် တကယ်မှန်သွားပုံ ရတယ် ဆိုတာ သူတို့ရဲ့ အသွင့်အပြင်ကို ကြည့်ရုံနဲ့ သိသွားပြီလေ။ ဥက္ကာပဲ။ အခြားသူမှမဟုတ်တာ။
`လေးစားသွားပြီကွာ။ မင်းကိုတော့ နာမည်နဲ့လိုက်ပါတယ်။ ချက်ချင်းကို သိသွားတော့တာပဲ။ ´မျိုးလင်းက ၀င်ပြောတာပါ။ ဒီတော့လည်း ကျွန်တော်က
`ဆရာကတော့ ဆရာပါပဲကွာ ဟားဟား။ ဒါနဲ့ နေ့လည်တောင် မယ်မဒီတို့က ငါတို့အိမ်ကို ထမင်းလာစားမှာ။ ဟဲဟဲ´
သကောင့်သား သုံးကောင်ကျွန်တော့်ကို အထူးအဆန်း သတ္တ၀ါလို ၀ိုင်းကြည့်နေကြလေရဲ့။
နေ့လည် အိမ်ပြန်လာပြီး ရေမိုးချိုးလို့ ထမင်းစားချိန်ရောက်ဖို့ကို စိတ်ထဲမှာ တိတ်တခိုး မြန်မြန်ရောက်ပါတော့ လို့ ဆုတောင်းနေမိတယ်။
သူတို့ရောက်လာတော့ ထမင်းစားကျရင်းနဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ မယ်မဒီရဲ့ ချစ်စရာကောင်းပြီး အေးချမ်းလွန်းတဲ့ မျက်နှာလေးကိုပဲ ခိုးခိုးကြည့်နေမိတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ မျက်လုံးချင်းဆုံးမိသွားရင် ကျွန်တော့်မှာရှက်လို့ ခေါင်းကြီး ငုံချမိတာလည်း အကြိမ်ကြိမ်။ ထမင်းစား သောက်ပြီးသွားတော့ မေ ပြင်ထားတဲ့ အချိုပွဲမှာ စားကြရင်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့ချင်းကို ရင်းနှီးအောင် ဆိုပြီး မိတ်ဆက်ပေးတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ Cupid ဟာ မယ်မဒီဆိုတဲ့ Venus ရဲ့ ရင်ခွင်ကို လုံးလုံး လျားလျား သက်ဆင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့မယ်။
ဖော်ပြသူ လင်းငယ် တင်ပြတဲ့ အချိန်ကတော့ 8:03 PM 1 ယောက်ရဲ့ အားပေးသွားပုံက
Cupid ၏ အချစ်ဇာတ်လမ်းအစ
ဒီနေ့မိုးလင်းထဲက လက်မလည်အောင် အလုပ်ရှုပ်နေရတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆက်နွယ်ပတ်သက်နေတဲ့ ဘော်ဒါ တစ်ဝမ်းကွဲတွေက ရည်းစားစာတွေ ရေးခိုင်းထားတာကို လက်စသတ်နေရတာနဲ့။ မနေ့ကညကလည်း တစ်ညလုံး ရေးပေးနေရတာနဲ့ ညကလည်း ၃ နာရီလောက်ကမှအိပ်ပျော်တယ်။ ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ ဥက္ကာကလည်း ဘယ်သူမှပိုက်ဆံ မပေးပေမဲ့ ရည်စားစာရေးတာနဲ့ အောင်သွယ် အလုပ်လုပ်တာကို ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး ပျော်ပျော်ကြီးလုပ်ချင်နေတာဆိုတော့ ခက်သားလား။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်ကို သူငယ်ချင်းတွေကတောင် Cupid လို့ နာမည်ပြောင်ပေးထားကြလေရဲ့။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကလည်း ကျွန်တော့်ရဲ့ နာမည် အရင်းဖြစ်တဲ့ ဥက္ကာ ဆိုတဲ့ နာမည်ထက် Cupid ဆိုတဲ့နာမည်ကို ပိုနှစ်သက်မိနေတာကို အဖေနဲ့ အမေသာသိရင် ရင်ဘယ်လောက် နာလိမ့်မလည်းဆိုတာလည်း စဉ်းစားမိတာ အခါခါပဲ။ ရည်းစားစာတွေ ရေးပြီးတော့ ကျွန်တော် နာရီလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ၈ နာရီ တောင်ထိုးတော့မယ် ဒါနဲ့ ရေချိုးပြီး ဘော်ဒါဝမ်းကွဲတွေကို ပေးဖို့ ရည်းစားစာတွေကို လွယ်အိတ်ထဲထည့်ပြီး ဒီကောင်တွေနဲ့တွေ့ဖို့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကို ထွက်လာခဲ့တယ်။
"ဟော ကိုဥက္ကာလာပြီ.. လာလာ.. အစ်ကို ထိုင် ဘာသောက်မလည်း"
"ပလိန်းတစ်ခွက်ပဲ မှာလိုက်ပါကွာ။ ညက မင်းတို့ အတွက် စာတွေရေးနေရတာနဲ့ အိပ်ရေးတွေ ပျက်တယ်.."
"ကျေးဇူးပါအစ်ကိုရာ။ ကျွန်တော်တို့ ကောင်မလေးတွေနဲ့ အဆင်ပြေသွားရင် လုံးဝ အစ်ကို့ ကျေးဇူးမမေ့ပါဘူး။"
"အေးရော့ ဒီမှာ မင်းတို့ အတွက်စာတွေ စာနဲ့မှ အဆင်မပြေရင်တော့လည်း တစ်ခြားနည်းလမ်း ရှာကြတာပေါ့ကွာ။"
"ဒါတော့ အစ်ကို့ကို ကျွန်တော်တို့ ယုံတယ်အစ်ကို အစ်ကိုရဲ့ နာမည်က ကြီးနေတာပဲ၊ အစ်ကိုရဲ့ စာနဲ့ဆို ကောင်မလေးတွေ ကြွေသွားတာများတယ်ဆိုတာ"
"ဟုတ်ပါပြီကွာ။ အဆင်ပြေပါစေဟုတ်လား။ ဒါနဲ့ မင်းတို့ ဟိုကောင်တွေ ကိုကော တွေ့မိသေးလား။"
"စောစောကတော့ ဒီကဖြတ်ပြီး ရွှေခေါင်းလောင်းမှာ ရှိမယ်လို့ ပြောသွားတယ် အစ်ကိုရ"
"အေးအေး... သွားလိုက်ဦးမယ်ကွာ အဆင်ပြေပါစေ"
ကျွန်တော်ရွှေခေါင်းလောင်းကို ထွက်လာခဲ့တယ်။ သေချာတယ် ဟိုကောင် တွေကျွန်တော့် အကြောင်းပဲ ပြောနေကြလိမ့်မယ်ဆိုတာ။ ကျွန်တော် ဆိုင်ထဲရောက်တာနဲ့ အရင်ဆုံး ကြားလိုက်ရတာက
"ဟော Cupid ကြီးလာပါပြီဗျာ မင်းရဲ့ လေးနဲ့ မြှားကော မတွေ့ပါလားကွ ဟေ"
"ဟေ့ကောင် ထော်ကြီး မင်းလာပြီး ပြောင်မနေနဲ့ ကျေးဇူးရှင်ကို ကျေးဇူးကန်းတာလားကွဟေ ပါးစပ်ထဲက စားထားတာတွေပါ ပြန်ထွက်လာမယ်နော်"
"ဟားဟား.. Cupid ရယ် မှားသွားလို့ပါ ဘာသောက်ဦးမလည်း ပြောပါ ကိုကျေးဇူးရှင်"
"ဟာ.. မင်းပြောမှ သတိရတယ် ဟိုဘက်မှာ ပလိန်းမှာခဲ့ပြီးတော့ မသောက်ခဲ့ရဘူးဟေ့"
မျိုးလင်း၊ ကိုကျော်၊ ထော်ကြီး သုံးကောင်သား ၀ိုင်းပြီး ရယ်ကြပါလေရော။ မင်းက တော့ ဒီအတိုင်းကြီးပါပဲကွာ လို့ပြောပြီး ဆက်ရယ်နေပြန်ရော။ဒါကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ မူပိုင် အကျင့်လေးတစ်ခုဗျ။ သူများတွေအတွက်သာ စဉ်းစားပေးနေရရင် ကိုယ့်အတွက် ကိုယ်မေ့မေ့ နေတတ်တာ။ ထော်ကြီးကို ကျေးဇူးရှင်ကို ကျေးဇူးကန်းတာ လားဆိုတာ ဘာလို့ ပြောလည်းဆိုတော့ ထော်ကြီးရဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ ထော်ကြီး အဆင်ပြေအောင် ကျွန်တော်ပဲ လုပ်ပေးခဲ့ရလို့လေ။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့က ကျွန်တော် အပါအ၀င် လေးယောက်ရှိတယ်။ မျိုးလင်းခေါ်နေမျိုးလင်း၊ ကိုကျော်ခေါ် ပြည့်ဖြိုးအောင်၊ ထော်ကြီးခေါ် ဝေယံ နောက်ပြီး ဥက္ကာခေါ် ကျွန်တော် Cupid။ မျိုးလင်းရဲ့နာမည် ပြောင်ဖြစ်လာပုံကတော့ ကျွန်တော်တို့ လမ်းထဲက ကိုဖိုးကျော်ဆိုတဲ့ အစ်ကိုကြီးက သူ့ကိုမျိုးလင်းမျိုးလင်းနဲ့ ခေါ်နေလို့ ဘာလို့ အဲ့လို ခေါ်တာလည်းဆိုတော့ မင်းတို့ အဲ့ဒါကို ပြောင်းပြန်ခေါ်ကြည့်လေဆိုတော့ သိသွားပြီး ဒီလိုပဲ ဆက်ခေါ်နေမိတယ်။ ကိုကျော်ကတော့ ကျောင်းမှာထဲက ဟိုလူ့ဆီက ကျော်လိုက် ဒီလူ့ဆီက ခွလိုက် လုပ်လွန်းလို့ ကိုကျော်လို့ ခေါ်ရင်းကနေ တွင်သွားတာပဲ။ ထော်ကြီးကတော့ သူရဲ့ ပုံစံကြောင့်တွင်သွားတာဗျ။ သူက အရပ်ရှည်ရှည် ဘော်ဒီတောင့်တောင့် ဒါပေမယ့် သူရဲ့ နှုတ်ခမ်းက အင်မတန် ထော်တာ။ မျိုးရိုးနဲ့ကို ထော်ကြတာ။ ဒါနဲ့ သူ့ကို ထော်ကြီးဆိုတဲ့ နာမည်ပြောင်ပေးထားကြတာပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ၀ါသနာကြောင့် Cupid လို့တွင်သွားတာ အထူးပြောဖို့ လိုမယ်မထင်ပါဘူး။
"ဟေ့ကောင် Cupid မင်းသိပြီးပြီလား" ကိုကျော်မေးတာပါ။
ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း "ဘာကိုသိရမှာလည်းဟ"
မင်းမေးလိုက်ရင် အဲ့ဒီလိုပဲ အဆုံးမရှိအစမရှိနဲ့ လို့ဆိုတော့ တဟီဟီးရယ်ရင်း
"ဒီလိုကွ မနေ့ကလမ်းထဲကို ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပြောင်းလာတယ်။ ချောတာတော့ တော်တော်လေး ချောတယ်ကွ။ မင်းကတော့ နောက်ထပ် အကျိုးထပ်ဆောင်ရဖို့များတယ်ကွ။ ဒါပေမယ့် ငါတို့အားလုံးကတော့ ဒီကိစ္စကို သူများထက် မင်းကိုယ်တိုင် မင်းအတွက် မင်းလှုပ်ရှားတာ ဖြစ်ချင်တယ်။ မင်းအသက်လည်း ၂၀ ကျော်တာ ၄ နှစ်လောက်ပိုတော့မယ်။ မင်းအခုထိ ရည်းစားတစ်ယောက်မှမရှိသေးတာ မင်းအတွက် မမိုက်ဘူးကွ။ မင်းနဲ့ အဲ့ဒီကောင်မလေးဆို တော်တော်လေး လိုက်ဖက်မယ်ကွ။ "
"ဟကောင်ရ ညွှန်းလှချည်လား အဲ့ဒီလောက်တောင် ချောနေလို့လား။ ဒါပေမယ့် ငါ့ရဲ့ နှလုံးသားမှာ ကလေးဘ၀ထဲက အခုထိ ဘယ်မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကိုမှ မငြိတွယ်သေးဘူးကွ။ ငါကိုယ်တိုင် အချစ်နဲ့ မထိတွေ့ဖူးသေးဘူး။ အချိန်တန်ရင်တော့လည်း သူ့ဟာသူဖြစ်လာမှာပေါ့ကွာ။ အေးဆေးပေါ့"
"အေးပါ ခဏနေရင် ငါအိမ် သွားပြီးဂစ်တာတီးရအောင် မင်းသီချင်းအသစ်ရေးထားတာ ရှိရင်လည်း နားထောင်ရအောင်ကွာ"
"အေး မနေ့ညကတော့ မရေးဖြစ်ဘူးကွ။ ဟိုတစ်နေ့က ရေးထားတာတော့ ရှိတယ်။သွားမယ်ကွာ.. လာ"
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပုံမှန် ဂစ်တာတီးတဲ့ နေရာက ကိုကျော်ရဲ့အိမ်ပဲလေ။ ဒီကောင်တွေက ကျွန်တော့်ရဲ့ သီချင်းတွေကို အမာခံ ခံစားပေးတဲ့ ကောင်တွေပေါ့။ ဒါကြောင့်လည်း ငယ်ငယ်တည်းက အခုထိ ပေါင်းမိနေကြတာပဲလေ။ ကျွန်တော်တို့ ကိုကျော်ရဲ့ အိမ်မှာဂစ်တာတီးနေတုန်း ထော်ကြီးက ခြံ အပေါက်ဝနားမှာ ကွမ်းငုံပြီး ကုလားထိုင်နဲ့ ထိုင်ပြီး နှပ်နေလေရဲ့။ ခဏနေတော့
"ဟေ့ကောင်တွေ ဟိုမှာ ဟိုကောင်မလေးကွ။ အဒေါ်ကြီး တစ်ယောက်နဲ့ ဈေးသွားဖို့လား မသိဘူး ဒီဘက်လာနေတယ်ကွ။"
"ကျွန်တော်လည်း ဘယ်မှာလည်းကွ ကြည့်ရအောင်"
"ဟိုမှာ မြန်မာဝတ်စုံလေးနဲ့လေကွာ။ မြန်မာဆန်သူလေးပေါ့"
ကျွန်တော့်မျက်စိထဲမှာ ကမ္ဘာကြီးက ရုတ်တရတ် ရပ်တန့်သွားတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာလည်း မရှိတော့ဘူး။ သူ့ရဲ့ လမ်းလျှောက်နေတဲ့ ဟန်လေးကိုပဲ မျက်စိထဲမြင်နေတယ်။ နှလုံးသားက တထိတ်ထိတ်နဲ့ ခုံနေတယ်။ သိလိုက်ပြီး Cupid ရဲ့နှလုံးသားကို Cupid ရဲ့မြှား ထိသွားပြီဆိုတာ။
နှလုံးသားအား အမှတ်တမဲ့ ပြင်းထန်စွာ
အခွင့်မရှိပဲ ရုတ်တရပ် ၀င်ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်
နှလုံးသား ခုံရုံးတင်၍ သင်၏ နှလုံးသားအား
တစ်သက်တစ်ကျွန်း အချစ် အမှုထမ်းရန်
ဖော်ပြသူ လင်းငယ် တင်ပြတဲ့ အချိန်ကတော့ 5:00 PM4ယောက်ရဲ့ အားပေးသွားပုံက
ဖော်ပြသူ လင်းငယ် တင်ပြတဲ့ အချိန်ကတော့ 1:12 PM3ယောက်ရဲ့ အားပေးသွားပုံက
လင်းငယ် ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ အွန်လိုင်းကနေ စာအုပ်တွေ ဒေါင်းပြီးတော့ ဟိုအရင်ကဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ စာအုပ်တွေကို ပြန်ဖတ်မိနေလေရဲ့။ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပေါ့။ အဲ့ဒီဖတ်သမျှစာအုပ်တွေထဲမှာ တာရာမင်းဝေရဲ့ ပန်းခေတ်က လမင်းဆိုတဲ့ ၀တ္ထုနဲ့ ဝေမှုးသွင်ရဲ့ တခါတရံများစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီး တော်တော်လေးကို စိတ်ထဲမှာ ကြိုက်သွားမိတယ်။ ဖတ်နေတဲ့ အခိုက်အတန့်လေးမှာလည်း ၀မ်းနည်းမှုရသပါတဲ့ နေရာဝမ်းနည်းမှု၊ ပျော်ရွှင်တဲ့ ရသပါတဲ့နေရာမှ ပျော်ရွှင်မှုစသည်ဖြင့် ခံစားချက်တွေ အပြည့်အ၀ပေးနိုင်တဲ့ စာအုပ်လေးနှစ်အုပ်ပါပဲ။ အဲ့ဒီထဲကမှ ဆရာတာရာမင်းဝေရဲ့ ပန်းခေတ်ကလမင်းဆိုတဲ့ စာအုပ်မှာပါတဲ့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကို အရမ်းကြိုက်သွားမိတယ်။ ဒါနဲ့ ဒီပို့စ်လေးမှာ တင်ချင်စိတ်တွေပေါ်လာပါရော။ တချိုလည်းသိပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ တချို့လည်း အမှတ်တမဲ့နဲ့ ကျော်ဖတ်သွားမိတာရှိလိမ့်မယ်။ တချို့လည်း လုံးဝမဖတ်ရသေးတာ ဖြစ်ချင်ဖြစ်လိမ့် မယ်။ ဒါနဲ့ပဲ အဲ့ဒီကဗျာလေးကို တင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သော ဆရာတာရာမင်းဝေအားအမှတ်တရအနေနဲ့ပေါ့။
ဖော်ပြသူ လင်းငယ် တင်ပြတဲ့ အချိန်ကတော့ 11:38 PM 1 ယောက်ရဲ့ အားပေးသွားပုံက